Porn ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်း - Reward Foundation - ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ လိင်နှင့်အင်တာနက်
သတင်းဘလော့ porn ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်း
adminaccount888 10th ဖေဖော်ဝါရီလ 2020 နောက်ဆုံးရသတင်းများ
Madeline သော့ National Review Institute မှနိုင်ငံရေးသတင်းစာဆရာဝီလျံအက်ဖ်။ ဘာခ်လီသည် ၀ န်ကြီးဖြစ်သည်။ သူမသည်စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ ဂလက်စ်မှဖြစ်ပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားထားသောအဆိုတော်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဤဆောင်းပါးသည်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ ထုတ်ဝေချက်တွင်ပါရှိသည် National Review Plus မဂ္ဂဇင်း.
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံကိုပိတ်ပင်သင့်သလား။ ဤမေးခွန်းကိုအလွန်ညာဘက်ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုခွင့်ပြုခြင်းသည်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုစော်ကားရာရောက်လိမ့်မည်ဟုလစ်ဘရယ်ဝါဒီအတော်များများကပြောဆိုကြသည်။ လူမှုရေးကွန်ဆာဗေးတစ်အတော်များများက“ ဟုတ်ကဲ့” ဟုပြောကြသည်၊ ထိုသို့မလုပ်ရန်မှာဘုံအကျိုးအတွက်စော်ကားရာရောက်လိမ့်မည်။ ရာထူးနှစ်ခုစလုံးသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်အစပြုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အစပြုရန်ပိုကောင်းသည့်နေရာမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုခိုင်လုံသောသံသယမရှိဘဲတည်ထောင်ထားသည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနပြုချက်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ပစ်မှတ်ထားနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု။
အင်တာနက်ပေါ်ပေါက်လာချိန် မှစ၍ porn သည်၎င်း၏“ သုံးဆ A” အယူခံဝင်မှုကြောင့်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည် - ၎င်းသည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးသုံးစွဲနိုင်သည်။ နှစ်စဉ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းသည်သန်းပေါင်းများစွာသောစားသုံးသူများထံမှဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာရရှိသည်။ ဒါဟာစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောစီးပွားရေးပါပဲ။ အမျိုးသမီးတွေဟာကစားစရာတွေ၊ အမျိုးသားတွေကကျူးကျော်သူတွေဖြစ်ပြီးဆယ်ကျော်သက်တွေကိုတပ်မက်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖော်ပြခြင်းမရှိပါဘူး။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအကန့်အသတ်မရှိရှိနေခြင်းသည်ဆေးလိပ်သောက်သုံးခြင်းနှင့်တူသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု၏အကျင့်ယိုယွင်းမှုသည်လူတို့ကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်လုံလောက်သော်လည်း၎င်းသည်ရှားပါးသည်။ ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုဆွဲဆောင်မှုနည်းပြီးအဆင်ပြေစေခြင်းအားဖြင့်စားသုံးသူဝယ်လိုအားကိုပိုမိုထိရောက်အောင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လို?
ဤတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထု၏သဘောထားပြောင်းလဲမှုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုပြန်လည်အမှတ်ရရန်အသုံးဝင်သည်။ ၁၈၇၀ ပြည့်နှစ်များမှ ၁၈၉၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုများသည်အကျင့်ယိုယွင်းမှုကြောင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းကိုတားမြစ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်များအစောပိုင်းတွင်စီးကရက်စီးကရက်သို့ရောက်သောအခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်သူတို့ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှု၏အဆိပ်တစ်ခုဟုမှတ်ယူခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်း ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းတွင်အရက်နှင့်စီးကရက်သောက်သုံးခြင်းကိုတားမြစ်ရန်ကြိုးစားမှုသည်မအောင်မြင်ပါ။ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်တားမြစ်ချက်သည် ၁၉၂၀ မှ ၁၉၃၃ အထိသာဖြစ်သည်။ စီးကရက်နှင့် ပတ်သက်၍ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်လူကြီး ၄၇ ရာခိုင်နှုန်း (နှင့်ဆရာဝန်အားလုံး၏ထက်ဝက်) သည်မီးထွန်းလာသည်။ ဆေးလိပ်သောက်တာကအေးဆေးပဲ။ အကြောက်လွန်ရောဂါ puritans မဟုတ်ကြ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုစိတ် ၀ င်စားသောကိုယ်ကျင့်တရားဝါဒီများသာမဟုတ်ပါ။ ၁၉၂၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင်ရောဂါကူးစက်မှုပညာရှင်များသည်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကိုမကြုံစဖူးတိုးများလာသည်ကိုသုတေသနပြုခဲ့သည်။ ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များရောက်သော်သက်သေအထောက်အထားများစွာရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မှုဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။ ယူအက်စ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုက ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေသည်ဟုသတိပေးသည်။ ၁၉၆၄ တွင်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ယေဘုယျအကြံပေးကော်မတီသည်အကြီးအကျယ်မီဒီယာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖော်ပြခံရသည့်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဆေးရွက်ကြီး lob ည့်သည်များသည်သူတို့၏နောက်ကျောခြေထောက်တွင်ရှိနေသည်။ ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပြ,္ဌာန်းခြင်း၊ ဆေးရွက်ကြီးအခွန်များမြင့်မားခြင်းနှင့်စီးပွားရေးသပိတ်မှောက်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၁၉၂၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ရောဂါကူးစက်ရောဂါဗေဒပညာရှင်အချို့သည်အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုနောက်ကွယ်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည့်အကြောင်းများကိုကြိုတင်စဉ်းစားထားကြသကဲ့သို့လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုများပြားလာခြင်းကြောင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြောင့်ခံစားနေရသောလူငယ်များအနေဖြင့်သိသာထင်ရှားသည့်အချက်တစ်ချက်မှာ အင်တာနက် porn နဲ့လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်များသို့ ၀ င်ရောက်သည်နှင့်အမျှကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းကိုညွှန်ပြသည့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်နွယ်မှုကိုသုတေသနပြုရန်လုံလောက်သောသုတေသနအဖွဲ့သည်လုံလောက်သည်။ အမှန်စင်စစ်လက်ရှိအချိန်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းစေသောသဘောသဘာဝနှင့် ၄ င်း၏ကြည့်ရှုသူများအားနှိုင်းယှဉ်ပျော့ပျောင်း။ အလွန်မှအစွန်းရောက်သောပစ္စည်းများကိုမည်သို့မြင့်တက်စေနိုင်သည်ကိုဖော်ပြသည့်လေ့လာမှု ၄၀ ကျော်ရှိသည်။ လေ့လာမှု ၂၅ ခုတွင်လိင်အရလိင်စွဲလမ်းသူများသည်လိင်စွဲလမ်းသူများဖြစ်သည်ဟုမှားယွင်းစွာပြောဆိုခြင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်နှိုးဆွမှုနည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည့်လေ့လာမှု (၃၅ ခု)၊ နှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကျေနပ်မှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းကိုလေ့လာမှု ၇၅ ခုကျော်ရှိသည်။ porn စာသားယောက်ျားခွန်အားမရှိသောစေသည်။ ဤအချက်ကိုကြေငြာသောလောက၊ မျက်နှာမလိုက်သောပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
ငွေရေးကြေးရေးအရစိတ် ၀ င်စားသောအလိုအလျောက်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများထံမှတုန့်ပြန်မှုမှာလှည့်ဖြားသောအရပ်ဘက်လွတ်လပ်သူများ၏လှည့်စားမှုသည်ဤသို့သောလေ့လာမှုများသည်ဆက်စပ်မှုကိုသာပြသည်၊ ဒါပေမယ့်ဂယ်ရီ Wilson, စာအုပ်၏စာရေးဆရာအဖြစ် Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် (လတ်တလောသိပ္ပံနည်းကျသုတေသနအကျဉ်းချုပ်) နှင့်နာမည်တူဝက်ဘ်ဆိုက်တည်ထောင်သူကဤသို့ရှင်းပြသည် -“ စိတ်ပညာနှင့်ဆေးပညာဆိုင်ရာလေ့လာမှုများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်အနည်းငယ်မျှသောသုတေသနသည်အကြောင်းရင်းများကိုတိုက်ရိုက်ဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အဆုတ်ကင်ဆာနှင့်စီးကရက်ဆေးလိပ်တို့အကြားဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာမှုအားလုံးသည်ဆက်စပ်မှုရှိသော်လည်းဆေးလိပ်မသောက်ဘဲအခြားသူများအားအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ”
ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၏ဇာတ်လမ်းသည်ဒေးဗစ်နှင့်ဂေါလျတ်၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီးလူအများအမြင်ပြောင်းလဲခြင်းသည်များစွာသောအိပ်မက်များထက် ပို၍ သိသာထင်ရှားသည်။ ဆေးရွက်ကြီးလော်ဘီသည် PR စနစ်ကျွမ်းကျင်သူ၊ ရှေ့နေ၊ လစာရသောဆရာဝန်နှင့်“ လေ့လာမှု” တိုင်းကိုလွှင့်ပစ်နေသော်လည်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကာကွယ်ရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။ စီးကရက်များကိုစစ်ထုတ်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်“ ကတ္တရာစေး” နည်းသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင်ဖက်ဒရယ်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်က“ မည်သည့်အသက်အရွယ်နီးပါးရှိသောအမေရိကန်များသည်စီးကရက်ကြော်ငြာကိုရှောင်ရှားရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း” မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
သတင်းထုတ်လွှင့်သူများသည်သူတို့ထုတ်လွှင့်သည့်စီးကရက်ကြော်ငြာတိုင်းအတွက်ဆေးလိပ်မသောက်ရန်ကြော်ငြာတင်ရန်လိုအပ်သော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်အချိုးအစားမှာဆေးလိပ်သောက်လိုသူကြော်ငြာ ၄ ခုသာရှိသည်။ ၁၉၄၀ မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိစီးကရက်ကြော်ငြာများအတွက်ဒေါ်လာ ၂၅၀ ဘီလီယံသုံးစွဲခဲ့သည်။ ထိုအရာအားလုံးရှိသော်လည်းလူကြီးများအကြားစီးကရက်သုံးစွဲမှုသည် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်၏အစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်။
ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးကြီးများသည်သိပ္ပံပညာကိုငြင်းပယ်သောကြောင့်လူမှုရေးကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားစွာဖြင့်ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ Big Porn သည်အလားတူလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နေသည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုပြုလုပ်ရန်နှင့်“ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာညစ်ညမ်းမှု” ကိုကတိပေးရန်အလုပ်များနေသည်။ သို့သော် Twittersphere နှင့်ရှေးရိုးစွဲမီဒီယာလောကပြင်ပရှိခုခံမှုကိုခုခံသုံးစွဲသူများက ဦး ဆောင်နေသည်။ အလက်ဇန်းဒါးရိုဒက်စ်သည်အသက် ၃၀ အရွယ်အမေရိကန်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုခံခဲ့ရသည်။ သူ၏စွဲလမ်းမှုမှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီးနောက်သူသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်အကူအညီတောင်းခံသူများအတွက်“ လောက၊ သိပ္ပံအခြေပြု၊ နိုင်ငံရေးမဟုတ်သော၊ လိင်အပြုသဘောဆောင်သည့်” NoFap ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ Reddit တွင် NoFap တွင်အသင်းဝင်တစ်သန်းကျော်ကျော်ရှိသည်။
ရှင်းနေသည်မှာလူငယ်များစွာသည်ညစ်ညမ်းသောလိင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကသူတို့၏လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုမည်သို့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်ကိုစိတ်ဝင်စားလာကြခြင်းဖြစ်သည်။ Podcast အိမ်ရှင် Joe Rogan နှင့်လူရွှင်တော် Duncan Trussell တို့အကြား NoFap နှင့် ပတ်သက်၍ အပြုသဘောဆောင်သည့်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုမှာ YouTube ၌အကြိမ်ပေါင်း ၂.၅ သန်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ Tressell က“ ငါဟာအပြစ်တခုခုကိုလုံးဝကျင့်သုံးဖို့မရည်ရွယ်ဘူး၊ ငါကိုယ်တိုင်ဆိုလိုတာက၊ မင်းကအဲဒါကိုလုပ်နေတာနဲ့အမျှအနည်းငယ်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်” ဟုစတင်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုခံစားရသောအခါယောက်ျားများစွာသည်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြသည်ဟု Rogan ကသဘောတူခဲ့သည်။ “ ဒီလိုစွမ်းအင်မျိုးကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုတွက်ဖို့အတွက်တစ်ခုခုပြောစရာရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်” ဟု Trussell ကဖြည့်စွက်ပြောကြားသည်။ ထို့နောက် Rogan သည်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဆက်ဆံရေးကိုအကြံပြုခဲ့သည်။
သိပ္ပံပညာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Big porn
ဘာသာရေးသို့မဟုတ်သဘောတရားအရလှုံ့ဆော်ပေးသောအငြင်းပွားမှုများကိုဆန့်ကျင်။ ထိုသို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုခုခံတွန်းလှန်မှုသည်ညစ်ညမ်းဆန်သောဝါသနာရှင်များကိုပိုမိုခြိမ်းခြောက်နေသည်။ ထို့ကြောင့် NoFap ကိုတည်ထောင်သူ Rhodes နှင့်လောကစာရေးဆရာ Wilson တို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်Big Porn ၏လုပ်ခလစာခံစားနေရသူများမှသူတို့အနေဖြင့်နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုများဖြစ်လာသည်ဟုဆိုကြသည်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းအပေါ်အမြင်မှာသိသာထင်ရှားလိမ့်မည်။ Rhodes သည်ထင်ရှားသောညစ်ညမ်းသောတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ် ဦး အားအသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ NoFap တွင်ပါ ၀ င်သည့်လိုင်စင်ရကုထုံးဆရာ Staci Sprout ကသူမသည်ဤတိုက်ခိုက်မှုများသည် NoFap ကိုပုံပျက်သောပုံစံသို့ ဦး တည်သွားလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Sprout ကဤအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းသည်“ ကောင်းစွာစီစဉ်ထားသောအသရေဖျက်မှုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး” ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်“ အရက်ထုတ်လုပ်သူများ၏အရက်အမည်မသိသူကိုပိတ်ရန်ကြိုးစားခြင်း” နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်ဟုဆိုသည် သူက "ဒါကဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်သောထောင်ပေါင်းများစွာသောညစ်ညမ်းတဲ့ဘဝတွေကိုနေထိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံစုံစက်မှုလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ "
ညစ်ညမ်းသောဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုသည်လွတ်လပ်မှုကိုလစ်ဘရယ်ဝါဒနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ရှေးရိုးစွဲဝါဒဟုမယူဆသင့်ပေ။ များပြားလှသောနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုသည်ကိုယ်ကျင့်တရားဝါဒီများကလှုံ့ဆော်သည်။ ဒေါ်လာဘီလီယံဘီလီယံကုမ္မဏီများ၏လောဘနှင့်အမြတ်ထုတ်မှုများကြောင့် Big Porn နှင့်သိပ္ပံပညာတို့နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ဂျာနယ်ထဲမှာရေးသားခြင်း ကင်ဆာရောဂါ၊ ဇီဝရုပ်ရှင်များနှင့်ကာကွယ်ခြင်းသုတေသီများကမှတ်ချက်ပြုသည်မှာ“ ဆေးလိပ်သောက်သုံးခြင်းကိုလျှော့ချရန်အကြီးမားဆုံးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာဆေးလိပ်သောက်သုံးခြင်းအတွက်လူမှုရေးအခင်းအကျင်းနှင့်မက်လုံးများကိုပြောင်းလဲစေသည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဖြစ်သည်ကိုသုတေသနပြုမှုများကပိုမိုများပြားလာသည်။ ” မူဝါဒတစ်ခုအရ၎င်းသည်“ အကျိုးသက်ရောက်စေသောသက်ရောက်မှုများ” ကိုဆိုလိုသည်။ ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးထွက်ကုန်များအပေါ်အခွန်ပိုမိုမြင့်မားခြင်း၊ ပြည့်စုံသောကြော်ငြာပိတ်ပင်ခြင်း၊ ဂရပ်ဖစ်ထုပ်ပိုးသတိပေးချက်များ၊
ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြောင့်ဆေးရွက်ကြီးဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုထင်ဟပ်ပြခြင်းနှင့်နိုင်ငံရေးပြpoliticalနာများကိုအမြန်ဖြေရှင်းနိုင်မည့်အစားရှည်လျားသောဂိမ်းကစားခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုသိပ္ပံအကြောင်းလူထုကိုပညာပေးပါ။ ထို့နောက် porn အသုံးပြုမှုကိုအဆင်ပြေစေရန်ကျယ်ပြန့်သောနိုင်ငံရေးနှင့်နိုင်ငံရေးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့များဖြင့်မဟာဗျူဟာကျစွာအလုပ်လုပ်ပါ။